True Story of an Intern in an ICU by Dr. Maung Maung Myint – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 13 December 2010 13 December 2010 Categories Uncategorized
7 thoughts on “True Story of an Intern in an ICU by Dr. Maung Maung Myint”
13 December 2010 at 2:20 am
မျက်ရည်လည်မိပါတယ်။ ဒါဟာ အဖြစ်မှန် ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာလည်း တော်တော်ခံစားသွားရတယ်။
I really appreciate doc
ကြေကွဲစရာလေးဖြစ်ပေမယ့်…. ၀မ်းမြောက်စရာလေး လည်း ဖြစ်နေတယ်…။ Humanity… Sympathy… Service… ဒါလေးကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်..။
I do appreciate Saya Myint as honorable person as included in five percent and thanks much to Saya Kyaw for sharing. We need such kind of stories.
Our society is dominant by self centered people about ninety five percent.
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီပို့စ်လေးဖတ်မိတော့ ကျနော်လဲ ကိုယ်တိုင် ခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီဆေးရုံမှာပါဘဲ။
ကျနော့်သားအငယ်မွေးတုန်းကပါ။ ခလေးအမေက ကိုယ်ဝန်အဆိပ်တက်နေတော့ (၇) လထဲနဲ့အရေးပေါ်မွေးခဲ့ရတာ။ မွေးပြီး၂ ပတ်လောက်နေတော့ ခလေးက အသားဝါဖြစ်ပီး ဆေးရုံပြန်တင်ရတယ်။
သူနာပြုဆရာမတွေ တကယ်စေတနာပါတယ် ပြုစုတယ်။ ခလေးအထူးကုဆရာဝန်မကြီးကလဲ ဂရုစိုက်တယ်။ အလုပ်သင်ဆရာဝန်လေးတယောက်လဲ ပါတယ်။ ဆေးရုံတင်ပြီးတပတ်လောက်ရှိတော့ သားရဲ့အခြေနေက ဆိုးလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆရာဝန်မကြီးက မရတော့ဘူးဆိုပြီး သားရယ် သားလိုဘဲအခြေနေဆိုးတဲ့ခလေးနောက်တယောက်ရယ်ကို သီးခြားအခန်းထဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီခလေး ၂ယောက်ကြိုကပ်မတ်ကုသဖို့အလုပ်သင်ဆရာဝန်လေးကိုတာဝန်ပေးပါတယ်။ အခန်းပြောင်းပြီးနောက်တညမှာဘဲ တခြားခလေးကဆုံးသွာတယ်။ သားကလဲအခြေနေဆိုးတော့ ခလေးအမေကို သူနာပြုတွေကခလေးနဲ့ပေးမတွေ့ပါဘူး။ ဆရာဝန်လေးက အလုပ်သင်ဆိုပေမဲ့တော်ပါတယ်ကြိုးစားကုတယ်
နောက်ကျနော့်ကိုမေးပါတယ် ခလေးအသက်ရှင်ဖို့ဆို အကို တတ်နိုင်လားကျနော်ကြိုးစားကုမယ်တဲ့ ။သူတကယ့်ကိုစေတနာနဲ့ ကုပေးလို့ သားလေးဒီနေ့အထိအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ကပါ။
27 January 2011 at 6:21 pm
ဆရာ့ဆီမှာ ဖတ်တဲ့သူများတော့ ဒီအကြောင်းလေးကို ရှယ်ပေးချင်လို့ပါ။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်လို့ထင်ပါတယ်။
Next Next post: In Ever Loving Memory of Win Oo